Uchwepheshe we-Semalt: I-Wordpress Theme Types - Amathiphu awusizo
Ukunquma isihloko se-WordPress yisinqumo esibalulekile okufanele senze ibhulogi. Esinye sezici ezinhle kakhulu ze-Wordpress wukuthi ungayenza isayithi isekelwe futhi yenze kubonakale ngendlela othanda ngayo futhi ufisa ngokufaka i-plugin ye-WordPress. Isihloko sizoshiya okuqukethwe kwakho okufanayo kodwa sishintshe ukubukeka kwewebhusayithi nendlela okulethwe ngayo okuqukethwe. Uhlobo lomqondo oyikhethayo lungenza ukubukeka kwakho kubonakale kuhluke ngokuphelele, into oyifinyelela ngokuchofoza okukodwa.
U-Ivan Konovalov, onguchwepheshe ohamba phambili uSemalt , uchaza ukuthi izihloko ze-Wordpress ziza ezinhlotsheni eziningi ezifaka:
Izingqikithi ezithengwayo noma ze-premium
Lezi yizingqikithi ozithenga kumthengisi we-intanethi. Unquma ukuzithenga ngemali oyedwa noma ukhetha ukukhokha njalo ngonyaka. Kuye kumthengisi, ungathola labo abanezifundo zevidiyo ezichaza ukuthi zingayisebenzisa kanjani.
Izingqungquthela zezinkokhelo ziza nezinzuzo eziningi kubandakanya:
Ukulungiswa nokusebenza okuphezulu
Nikeza ukusekela okugcwele
Basebenzisa ubuchwepheshe bamuva kanye namazinga aphezulu ewebhu
Baza nezinketho eziningi kanye nezici zokwenza ngokwezifiso ezikuvumela ukuguqula ukusebenza kwesayithi lakho. Ezinye zezinketho zihlanganisa ukushintsha umbala nokushintsha isakhiwo sesayithi lakho..Yilezo ezingcono kakhulu kubhulogi ephelele.
Kukhona izinkulungwane zezinhlobo zamahhala zamahhala ku-intanethi. Bakhululekile ukulanda, futhi ungawasebenzisa ngaphandle kwemingcele. Ungabathola ngokuvakashela i-Wordpress.org themes directory, futhi bangamahhala angu-100%.
Free - Kusho ukuthi uthola ngaphandle kokukhokha lutho. Izingqikithi zamahhala zihluke ku-freemium kusukela izingqikithi zamahhala zigcwele-ezivela kusukela ekumeni kuya kumiklamo emangalisa.
i-Freemium - Lezi zihloko zikhishwa ngemisebenzi elinganiselwe ehloselwe ukuhlola lapho ekugcineni uma uyabathanda, uzocelwa ukuthi uthenge inguqulo egcwele. Ngakho-ke, abakhululekile ngoba kuzodingeka ukhokhele ngesikhathi.
Baphinde babhekiswe njengeziqalo eziqalile zokuthuthukiswa. Lokhu kungenxa yokuthi izingqikithi sezilungiselelwe kakade, kodwa zidinga ukuthuthukiswa zibe into engcono.
Lezi zingqikithi zihlotshaniswa ekuklanyeni okuncane. Lokhu kufaka phakathi izingqungquthela ezifana namasaka, amathambo, kanye nezimpande lapho abathuthukisi bazuza khona komunye nomunye bazama ukuthuthukisa ukuba zizinzile futhi zibe nezomnotho. Bahlose ukunikeza abasebenzisi ngolwazi ukwenza ngokwezifiso amakhodi wendaba, futhi bayanconywa kulabo bantu abafuna ukuthuthukisa izingqikithi zabo.
Zonke izihloko zihlukile, futhi zonke zenzelwe ukuhambisana nezidingo zomuntu ngamunye. Yenza ucwaningo ngezici zomuntu ngamunye ngaphambi kokunquma isihloko esizoyisebenzisa kubhulogi yakho Source .